Isidlo inyama nengulube epanini ukuthosa ujike elimnandi futhi simnandi kakhulu ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, phansi inyama anyanisi ukulungiselela ngokushesha okuningi kunalokho izingcezu lonke komkhiqizo. Namuhla, thina ukuyichaza ngokuningiliziwe indlela ukwenza nesitshulu okumnandi nge okuxubile inyama nengulube nendlela upheke okwehla esiphundu kanye nemifino kanye namakhambi.
1. Indlela Fry epanini nengulube utamatisi unama
Izingxenye ze- course yesibili :
yengulube mafutha - 270 g;
lesi sidlo esingenamathambo esehla inyama yenkonyana - 270 g;
Isibani phakathi emhlophe - 3 PC.
usawoti, upelepele obomvu - engeza ukunambitha;
amafutha sunflower - 5-6 nezinkezo ezinkulu;
utamatisi unama - 3 nezinkezo ezinkulu;
amanzi okuphuza ehlungiwe - 2/3 inkomishi.
Inqubo ukulungiselela goulash
Isidlo inyama nengulube kuso kufanele baqale ukupheka nge ukugawulwa inyama umkhiqizo. Lokhu kudinga ukuba uthathe inyama yenkonyana olunamafutha amancane noma yengulube, ubageze kahle, usike, bese yokungalungiseleli. Kulandela inyama kufanele ukusonta ikhanda kanye no-anyanisi ezimhlophe. Ngaphezu kwalokho, kokubili izithako kudingeka uhlanganise, ukunambitheka upelepele obomvu kanye nosawoti.
Isidlo inyama nengulube epanini uzilungiselele ngokushesha okukhulu. Futhi goulash ngothi lwawo. Ukwakha izitsha ezifana kudingeka ukubeka epanini on isitofu igesi, uthele ibhotela ukubeka inyama oqoshiwe. Ngemva ukugxusha kancane athosiwe (ngemva kwemizuzu engu-20), kubalulekile ukuba uthele amanzi okuphuza wafaka utamatisi unama. Kule ngxenye isidlo kumelwe ibila elinye imizuzu 5-8 ke ususa emlilweni. Kunikezwe ukudla etafuleni, kanye ecubuziwe amazambane, Umakharoni noma spaghetti.
2. Ground Yenkomo nemifino epanini
ezimhlophe isibani anyanisi - 3 PC.
Inyama yenkomo fat - 500 g;
usawoti, pepper - engeza ngokubona;
izaqathe besilinganiso - 1 noma 2 PC.
Potato nezilimo eziyizigaxa zinkulu - 4-5 PC.
amafutha sunflower - I-ukuthosa;
amakhambi fresh - pair lwemishayo;
obukhulu ukhilimu omuncu - 160 g
Isidlo inyama nengulube epanini ukupheka kahle imifino kanye namakhambi. Ngemva kwasemini, ngakho kuningi okumnandi nokwanelisayo. Lokhu kudinga gaya yenkomo fat grinder inyama nge onion emhlophe, bese ukunambitheka nabo emnyama etafuleni usawoti. Okulandelayo, udinga ukuhlanza amazambane nezilimo eziyizigaxa, izaqathe kanye nquma wabayisa tincetu mncane.
Uma zonke izithako zilungele, akufanele sithathe pan, uthele kuwo amafutha, ukushisa kanye ukubeka yenkomo phansi. Kuphekeke inyama isithako imizuzu eyishumi, kuyadingeka ukuze ungeze isanqante and amazambane nezilimo eziyizigaxa. Kulesi Ukwakheka, imifino kufanele uzilungiselele for isigamu sehora, ibangele njalo ngesipuni. Ekupheleni isidlo kufanele uthele ukhilimu obukhulu ufafaze amakhambi oqoshiwe (parsley, dill).
Ethosiwe inyama nengulube nge imifino Kunconywa ukuba bethule etafuleni esishisayo ne kakolweni nesinkwa, isoso noma yimuphi omunye sauce. Kuyaphawuleka ukuthi ngenxa kwasemini inyama izithako ukunconywa ikakhulukazi futhi flavorful. Uma wayefisa, lo dish kungenziwa hhayi kuphela yenkomo, kodwa futhi inyama yengulube, yemvu inkukhu inyama.
Imayonnaise Japanese noma Tamago Ukungaboni mono: iresiphi
I-biography emfushane kaTvardovsky kubalandeli bokudala
Mauritius Isiqhingi. Izibuyekezo ikhambo
I-Hyde: indlela yokwenza ama-potions ku-minecraft